पार्टी एकीकरण हुनु आफैंमा राम्रो कुरो हो । तर भन्दैमा एकीकरण हुने पनि होइन । अहिलेसम्म एकीकरणसम्बन्धी विषयमा मलाई केही थाहा छैन ।
आत्मसमर्पण हुनेगरी पार्टी एकीकरणमा नजाने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूले बताएका छन् । समाजवादी पार्टीसँगको पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले समाजवादी पार्टीसँगको वार्ताबारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
नयाँ शक्ति पार्टीसँग संघीय समाजवादी फोरमले पार्टी एकीकरण गरी बनाएको समाजवादी पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या चर्किन थालेपछि राजपासँगको एकीकरण वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने रणनीति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लिएको उनको पार्टीका एक नेताले बताए । सपाका नेताहरूले राजपाका विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई औपचारिकता प्रदान गरेपछि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सपाका नेता डा. शिवजी यादवले बताएको केही दिनमै राजपाका संयोजक यादवले वार्ताबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका हुन् ।
कारोबारसँगको कुराकानीमा संयोजक यादवले भने, “पार्टी एकीकरण हुनु आफैंमा राम्रो कुरो हो । तर भन्दैमा एकीकरण हुने पनि होइन । अहिलेसम्म एकीकरणसम्बन्धी विषयमा मलाई केही थाहा छैन ।”
अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोसँग सपा अध्यक्ष यादवले पटक पटक वार्ता गरेको विषयमा मिडियामा यत्रो विधि समाचार आएको के हो ? भनी सोधिएको जवाफमा राजपा संयोजक यादवले महतोसँगको वार्ताबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
सपाले सरकारमा जाने विषयमा राजपालाई कुनै जानकारी दिएको थिएन । नयाँ शक्तिसँगको एकीकरणका बेला राजपाका नेताहरूले संघीय समाजवादीका अध्यक्ष यादवलाई केही समय पर्खेर एकता गर्न भनेकोमा त्यसलाई नमानी नयाँ शक्तिसँग एकता गरिएको थियो । राजपाका नेताहरूले पछिल्लो समय सपाका नेताहरूको कार्य विभाजनले पार्टीको अन्तर्विरोध चर्किएको विषयमा विशेष सजगता अपनाएका छन् ।
सपा बनेपछि पार्टीका नेताहरूलाई उचित व्यवस्थापन र सन्तुष्ट गर्न नसकेपछि कतिपय नेताहरू सत्ताधारी नेकपामा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर, केही नेताहरूले राजपाको संरचना र केही विषयमा नीतिगत स्पष्टताको अभावले एकीकरणमा बाधा पर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
राजपाका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले एकीकरणका लागि जुनसुकै बाटो रोजेपनि अध्यक्ष मण्डल र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट केही विषयमा अनुमोदन आवश्यक हुने बताए । महाधिवेशनका लागि पनि आवश्यक विधि विधानको आवश्यकता हुने र त्यसबारे सहमतिमा विधिहरू तय गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको छ । अर्कोतर्फ पार्टी एकीकरणका लागि सपाले सरकार छाडनुपर्ने हुन्छ अथवा राजपाले सपालाई वार्ताका लागि सरकार छाड्नुपर्ने अडान फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जनाए ।
सपाका नेताहरूका अनुसार तत्काल सरकार छाड्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ सरकारमा बस्नु र सरकार छोड्नु राजनीतिक दलको राजनीतिक विषय भएकोले यसबारे राजपाले दबाब दिँदैमा पार्टीले सरकार नछोड्ने पार्टी निकट एक नेताले बताए ।
उनले भने, “सरकार छोड्न नयाँ शक्तिले पनि भनेको थियो । तर अध्यक्ष यादवले पार्टी एकीकरण गरौं र पछि निर्णय अनुसार सरकार छाडौं भनेका थिए । अहिलेसम्म सरकार छाडिएको छैन ।” यादवले राजपामा सरकारमा जान हुने नेताहरूसँग छलफल गरी वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर आफ्नो आन्तरिक विवादलाई थामथुम पार्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ ।